Midawga Afrika: Sirdoonka Alshabaab Waa Ka Awood Badan Yahay Kan AMISOM – Heemaal News Network
Midawga Afrika: Sirdoonka Alshabaab Waa Ka Awood Badan Yahay Kan AMISOM
Ururka Midowga Afrika ayaa shaaca ka qaaday in maleeshiyaadka al-Shabaab ay sirdoon ahaan ka dheereeyen ciidamada AMISOM.
Ururka ayaa sheegay in maleeshiyaadka al-Shabaab ay adeegsadaan farsamooyin dheeri ah, halka ciidamada AMISOM uu aad u hooseeyo sirdoonkoodu.
Simon Mulongo oo ah Ku-xigeenka madaxa ururka AU-da u qaabilsan arrimaha Somalia, ayaa sheegay in arrinkaasi ay ku ogaadeen daaraaseyn ay ku sameeyen sirdoonka labada dhinac.
Simon Mulongo, oo wareysi siinaayay Xarunta Afrika ee Daraasadka Istaraatijiyadda ee loo yaqaan “Africa Center for Stratigic Studies”, ayaa tilmaamay in hawlgalka AMISOM ay dhibaatooyin loojistiko iyo gabaabsi saanad ay ka hortaagan tahay inay ka guuleystaan al-Shabaab.
Simon Mulongo, waxa uu cadeeyay in ciidamada AMISOM ay lasoo daristay dhibaato dhinacyo badan leh, waxa uuna intaa raaciyay in sirdoonka al-Shabaab ay mar waliba yihiin kuwo ka faa’iideysta daldaloolada.
Simon Mulongo, oo sii wata warbixintiisa ayaa ka digay inaan marnaba guulaha AMISOM la xaqiijin karin, haddii ay sii socdaan inay ku tiirsanaadaan qaab-dhismeedka dhaqanka nabad-ilaalinta, sida uu hadalka u dhigay.
Waxa uu sheegay in hoos u dhaca ciidamada AMISOM ay sabab u yihiin ciidamada Qaranka Somalia oo aan heysan agab iyo tababar ku filan, taa oo keentay in saanada AMISOM wax laga siiyo, sidaana ay ku idlaato saanada ciidamada AMISOM.
Warbixinta Simon Mulongo, waxaa uu ku celceshay “Alshabaab waxay haystaan awoodo dhinaca sirdoonka oo aad uga wanaagsan hawlgalka AMISOM, AMISOM xiligaan dhanka sirdoonka uma babacdhigi karaan al-Shabaab, waayo waxaa jira awoodo ay shabaabka leeyihiin kuwaa oo qarsoon’’
Sidoo kale, Mr Simon Mulongo waxa uu sheegay inay AMISOM awood xumo ka haysato dhinaca diyaaradaha qumaatiga u kaca, isagoo sheegay inay haystaan saddex Helikopter.
Jaamacada Adal Medical Eo Borama Qaliino Tabarucaad ah ka Fulinaysa Degmada Gabiley,
Al-Shabaab Oo Weerar Madaafiic ku Qaaday Saldhig Ciidanka Kenya ku Leeyihiin Gobolka Gedo.
Al-Shabaab ayaa weerar madaafiic ku qaaday saldhig Ciidamada Kenya ku leeyihiin deegaanka Faxfac-dhuun ee degmada CeelWaaq, sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka milateriga Soomaaliya. Wararka ayaa sheegaya in tobaneeyo madaafiic lagu garaacay xerada, iyadoo […]